नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला, कति आवेदन दिने ? - Arthasansar
शुक्रबार, ०२ माघ २०७७, ०७ : २३ मा प्रकाशित
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आज (माघ २ गते, शुक्रबार) देखि हालसम्मकै ठुलो साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला भएको छ । बैंक ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
कहाँ- कहाँबाट आवेदन दिने ?
फ्ल्योर हिमालयनले डाक्याे साधारण सभा, हकप्रद निष्कासन प्रस्ताव पेश हुँदै